मर्स्याङदीको हर्सिङडाँडामा प्याराग्लाइडिङ उडानको सफल परीक्षण — नयाँ कुरा
लमजुङको मस्र्याङ्दी गाँउपालिकामा प्याराग्लाइडिङ उडानको सफल परीक्षण भएको छ । वडा नं. ३ खुदी हर्सिङडाँडाबाट सोमबार प्याराग्लाईडिङ उडानको सफल परीक्षण गरिएको हो ।
पर्यटकीय स्थल हर्सिङडाँडाबाट उडान भरेको प्याराग्लाइडिङलाई पाइलटहरुले सफल अवतरण गरेका थिए । हर्सिङडाँडाबाट उडेको प्याराग्लाइडिङ वडा नं. ८ भुलभुलेको कुवापानीमा अबतरण गरिएको थियो ।
पोखरास्थित ओपन स्काई प्याराग्लाईडिङ प्रालिको समन्वयमा सम्भाब्य परीक्षण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले जानकारी दिए । ऐतिहासिक तथा पर्यटकीय स्थलको थप प्रवर्धनका लागि प्याराग्लाईडिङ उडान परीक्षण गरिएको उनले बताए । पहिलो परिक्षण नै सफल भएकाले यसलाई नियमित गर्नका लागि तयारी सुरु गर्ने उनले बताए ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष होमबहादुर विकका अनुसार सोमबार २ वटा प्याराग्लाईडिङ उडाइएको थियो । ओपन स्काई प्याराग्लाईडिङ प्रालिका टेन्डम फ्लाईट पाइलट नुरेन रानाले गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङलाई लिएर र सोलो फ्लाईट पाइलट सुमन मगर एक्लैले प्याराग्लाईडिङ उडाएका थिए ।
टेन्डम फ्लाईट पाइलट नुरेन रानाले हर्सिङडाँडाबाट सफल परीक्षण भएको र अब नियमित प्याराग्लाईडिङ गर्न सकिने बताए । लमजुङमा यसअघि विभिन्न मेला तथा महोत्सवको अवसरमा मात्र प्याराग्लाइडिङ उडान गरिँदै आएको छ । यसलाई व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सके पर्यटन प्रवर्धन हुने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
वडा नं. ३ का अध्यक्ष प्रेमबहादुर बस्नेतले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउन प्याराग्लाईडिङले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । हर्सिङडाँडामा दैनिक ४०÷५० जनासम्म घुम्ने आउने गरेको र यसले झनै पर्यटक संख्या बृद्धि गर्ने उनले बताए ।
अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्र्तगत पर्ने खुदीबजारबाट हर्सिङडाँडा साढे १२ किलोमिटर दूरीमा पर्छ । हर्सिङडाँडामा बीर भक्ति थापाले छेलो हालेको ठाउँ, गोठ राखेको ठाउँ, गोठमा पकाएर खाने गरेको ओदानलगायत छन् ।
हर्सिङडाँडाबाट बुद्ध, हर्कपिक, ङादी पिक, हिमचुली, लमजुङ, माछामुछ्रेलगायतका दर्जनौं हिम श्रृंखला देख्न सकिन्छ । ऐतिहासिक महत्व रहेको र प्राकृतिक सौन्दर्यले पनि पर्यटकलाई आकर्षित पार्ने बस्नेतले बताए ।
ग्रामीण पर्यटनको पर्याय बन्दै गरेको लमजुङ अब प्याराग्लाइडिङको पनि गन्तव्य स्थल बन्ने भएको छ । यहाँका राइनासकोट, बाग्लुङपानीको पुमागाउँ, चण्डिस्थानको मकैडाँडा, गौंडा र हिलेटक्सार डाँडाबाट प्याराग्लाडिङ गर्न सकिने पर्यटन व्यवसायीहरु बताउँछन् । व्यवसायिक प्याराग्लाडिङ सुरु गराउन सके अन्नपूर्ण पदमार्ग र यहाँका होमस्टे घुम्न आउने पर्यटकहरुको बसाई लम्बाउन सकिने ब्यवसायीहरु बताउँछन् ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेपछि त्यहाँबाट प्याराग्लाइडिङ विस्थापन हुने भन्ने हल्लासँगै प्याराग्लाइडका व्यवसायी नयाँ सम्भाव्य स्थलको खोजीमा छन् ।